वल्डलिंकको अफर इन्टरनेट खरिद गरे नेट टिभी र सेटअपबक्स सित्तैमा-NepalKanoon.com
काठमाण्डौ: वल्डलिंक कम्युनिकेसनले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि लक्षित गर्दै नयाँ नयाँ अफरहरु प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै अफर जम्बो खर्च कम भो नामक अफरको सुरुवात गरेको छ । जस अन्र्तगत ग्राहकहरुले ६ महिनाको इन्टरनेट खरिद गर्दा ६ महिनाको नेट टिभीका साथ साथै निशुल्क सेटअपबक्स पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस अफर अन्र्तगत २० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु. ८४००, ३० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु.९,६३० र ५० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु. १२१५० अग्रिम रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनेछ । यो अफर भाद्र मसान्तसम्मको लागि मात्र लागू गरिएको कम्पनिले जनाएको छ ।